Ukusingathwa kwePodcast, uSyndication, uLuhlu lokuTshekisha | Martech Zone
Kunyaka ophelileyo ibingunyaka I-podcasting yaqhuma ngokuthandwa. Ngapha koko, i-21% yabantu baseMelika abangaphezu kweminyaka eyi-12 bathe bamamela ipodcast kwinyanga ephelileyo, ethi inyuke ngokuthe chu unyaka nonyaka ukusuka kwisabelo se-12% ngo-2008 kwaye ndibona eli nani liqhubeka nokukhula.
Ngaba uthathe isigqibo sokuqala eyakho ipodcast? Ewe, kukho izinto ezimbalwa ekufuneka uziqwalasele kuqala- apho uya kubamba khona ipodcast yakho kwaye uza kuyikhuthaza phi. Apha ngezantsi ndidwelise iingcebiso kunye nezifundo ezimbalwa ezifundiweyo ekukhuthazeni ipodcast yethu Umda weWebhu, ke ndiyathemba ukuba ziya kuba luncedo kuwe!
Iworkshop yePodcasting kunye neNgcaciso
Kutshanje ndiphuhlise iworkshop yamashishini e-podcasters ukuhambisa iindlela ezithile zokudibanisa kunye nokukhuthaza ii-podcast zabo. Sisebenzise uninzi lwezi ndlela kunye I-Dell Luminaries podcast, Ukutyhala kwi-1% ephezulu yazo zonke iipodcasts zeshishini.
Uyibamba phi iPodcast yakho
Ngaphambi kokuba usasaze kuyo nayiphi na imikhombandlela, kuya kufuneka uthathe isigqibo sokuba uya phi umkhosi ipodcast yakho. Ukuthatha isigqibo ngokusingathwa kwepodcast yakho kuya kuxhomekeka kuninzi apho ungangenisa khona ipodcast yakho njengoko ezinye izikhombisi zinamaqhina athile kunye nabanye. Kwipodcast yethu, i-Edge yeWebhu, siyisingatha kunye neLibsyn kwaye yenye yeendawo ezaziwa kakhulu ngaphakathi.
Musa ukusingatha ipodcast yakho kumamkeli wewebhu oqhelekileyo okanye kwiwebhusayithi yakho yangoku. Indawo yokusingathwa kwePodcast ineziseko ezakhelwe ukusasazeka kwefayile yeaudio enkulu kunye nokukhuphela kwiwebhu. Iindawo eziqhelekileyo zokubamba iwebhu zinokubangela ukuphazamiseka kokumamela kwaye zinokude zibize imali ngeendleko ezingaphezulu ekusebenziseni ibhendi.
UDouglas ubamba iindwendwe Martech Zone udliwano, Ngaphandle kwesangqa, yaye Umkhosi wamandulo kunye Umlilo, Umgcini wepodcast oyingqayizivele kunye nomsebenzisi omhle obandakanya zombini iwebhusayithi kunye ne-podcast yakho. Indawo ikwabonelela ngetoni yeempawu ezizodwa, kubandakanya imikhosi engenamda, iiprofayili zeendwendwe ezingenamda, iintengiso ezixhasayo, bonisa amakhonkco, amakhonkco obhaliso, amaphepha okwabelana, kunye nomdlali omangalisayo we-HTML5 podcast.
Ezinye iinkampani ezimbalwa zokubamba i-podcast onokuzisebenzisa zezi:
Umtya Ukufunyanwa kwePodcast, ukumamela, ukubamba kunye nokusasazwa kweRSS.
Anchor -Yila kwaye ubambe iziqendu ezingenamda, usasaze umboniso wakho kuyo yonke indawo, kwaye wenze imali. Konke kwindawo enye, konke simahla.
I-Audioboom -Fikelela kubaphulaphuli abazinikeleyo kwaye uhambise umyalezo wophawu lwentengiso ngokufaka okunamandla kwintengiso kunye nokuvumela okuvela kwitalente ephezulu kwipodcasting.
I-Blubrry - IBlubrry.com yindawo yokuhlala i-podcasting kunye nesikhombisi esinika abadali amandla okwenza imali, ukufumana imilinganiselo yabaphulaphuli eneenkcukacha kunye nokusingatha iaudiyo kunye nevidiyo. Nokuba ungumdali weendaba, umthengisi okanye umthengi wemithombo yeendaba, iBlubrry sisinxibelelanisi sakho semidiya yedijithali.
I-Buzzsprout -Qala i-podcasting namhlanje ngokusingathwa simahla kwe-podcast I-Buzzsprout, isoftware elula yokubamba, ukukhuthaza kunye nokulandela umkhondo wepodcast yakho.
Ikhutshwe Ukusuka ekusingatheni nasekucwangciseni ukwenziwa kusebenze kunye nohlalutyo, i-Casted liqonga lolawulo lomxholo kubathengisi be-B2B ngelizwi.
I-Libsyn -I-Libsyn ibonelela ngayo yonke into efunwa yipodcast yakho: izixhobo zokupapasha, ukusingathwa kwemidiya kunye nokuhanjiswa, i-RSS ye-iTunes, iWebhusayithi, izibalo, iiNkqubo zeNtengiso, isiQinisekiso sePrimiyamu, iiApple zeApple, izixhobo zeApple kunye neWindows.
Megaphone Izixhobo zokupapasha, ukwenza imali, kunye nokulinganisa ishishini lakho lepodcast.
Isitudiyo sikaOmny -I-Omny Studio sisisombululo seshishini sepodcasting esibandakanya umhleli okwi-Intanethi, ukwenza imali, usasazo lokubamba, ukunika ingxelo, kunye nezinye izinto.
PodBean Isisombululo sokushicilela esilula sepodcast. I-bandwidth engenamkhawulo kunye nokugcinwa. Yonke into iPodcaster ifuna ukusingathwa, ukukhuthazwa kunye nokulandelelwa kwePodcast yakho.
I-Simplecast -Shicilela iipodcast zakho ngendlela elula.
SoundCloud -Podcasting kwi-SoundCloud yenza kube lula nakubani na ukuba abalise amabali, alayishe kunye nokwabelana. Yakha uluntu lwakho kweyona ndawo izinzileyo kwaye inomdla wokubamba iqonga kwihlabathi.
Ispreaker - U-Spreaker unayo yonke into! Cwangcisa iakhawunti yakho kwaye ulungele ukurekhoda iipodcast okanye ubambe iinkqubo zerediyo kwikhompyuter yakho okanye isixhobo esiphathwayo.
Ijethi yePodcast -UkuHamba kwePodcast yePremiyamu: Ukuhanjiswa okukhawulezileyo kunye nokuSebenza.
Emva kokumisela ukusingathwa kwe-podcast yakho, kuya kufuneka ube ne-RSS feed esebenzayo. Amaxesha amaninzi xa useta i-akhawunti yokubamba i-podcast uyakuphosa into eya kwaphula i-RSS feed. Ngaphambi kokungenisa nasiphi na isikhombisi, kuyakufuneka ujonge ukuze ubone ukuba ngaba ukutya kwe-RSS kuyasebenza. Ukuvavanya i-RSS feed yakho, sebenzisa Isiqinisi sokuFumana isiXhobo ukubona ukuba naziphi na iimpazamo ozenzileyo. Ukuba unesondlo esivumelekileyo, uze ungene kwisikhokelo sakho sokungeniswa.
Apho ungadibanisa iPodcast yakho
Inqaku elisecaleni: Ngaphambi kokungenisa ipodcast yakho nakweyiphi na imikhombandlela ekhoyo, ndicebisa ukuba ube nesiqendu esingaphezulu kwesinye sepodcast kwi-RSS feed yakho. Ungangenisa kuninzi lwemikhombandlela kunye nepodcast enye kuphela, kodwa uninzi lwabaphulaphuli kwipodcast yakho, baya kufuna ukubona ngaphezulu kwesiqendu ngaphambi kokubhalisela umboniso wakho.
kuba iPhone kwaye Android izixhobo zilawula imarike eshukumayo, ezi zimbini zokuqala ukubhaliswa ziyimfuneko kuyo yonke ipodcast!
iTunes - Emva kokuba wenze i-RSS feed yakho, ukungenisa i-podcast yakho kwi-iTunes kuya kuba linyathelo lakho lokuqala. I-iTunes inelinye lawona manethiwekhi athandwayo kakhulu ngabaphulaphuli beepodcasters. Kuya kufuneka kuqala ube ne-ID ye-Apple, ukuba sele unayo i-iPhone, kuya kufuneka ubenesazisi. Sayina ungene kule iTunes Podcast iphepha loqhagamshelo kunye ne-ID yakho yeApple kwaye uncamathisele ukutya kweRSS kwindawo ye-URL kwaye ungenise umboniso wakho. Kuxhomekeke kwiakhawunti yakho, inokuvunywa ngokukhawuleza okanye kungathatha iintsuku ezimbalwa. Nje ukuba wamkelwe kwi-iTunes, umboniso wakho uya kubonakala kuninzi lweepodcatchers ezahlukeneyo ngokuzenzekelayo njengoko ezo zixhobo zifumana ukutya kwazo kwi-iTunes. Ngelishwa, nge iTunes, awuyi kufumana kubahlalutyi enxulumene neakhawunti yakho.
Bhalisa iPodcast yakho ngeTunes
Umphathi wePodcast kaGoogle - UGoogle ukhuphe iqonga elinolunye uhlalutyo olubalaseleyo lokujonga ukumamela kwakho iipodcasts. Ungalibona inani lemidlalo, idlala kwiintsuku ezingama-30 zokuqala, ubude bexesha, kwaye ujonge ukusebenza ngokuhamba kwexesha. Sayina ungene ngeakhawunti kaGoogle, kwaye ulandele amanyathelo yongeza i-podcast yakho.
Bhalisa iPodcast yakho kuGoogle
Pandora -I-Pandora iyaqhubeka nokuba ngabaphulaphuli abaninzi kwaye ixhasa ngokupheleleyo ii-podcast ngokunjalo, nokuba nakho ukuyibeka iliso.
Bhalisa iPodcast yakho ngePandora
Spotify -Spotify iyaqhubeka nokwanda ibe ngumxholo yeaudio kwaye, ngokuthengwa kwe-Anchor, ithatha injongo ephambili yokuba ngumnini ophakathi. Ngabasebenzisi abaninzi, awuyi kufuna ukuphoswa!
Bhalisa iPodcast yakho ngeSpotify
Amazon -Umculo weAmazon yinto efikayo kodwa enokuVakala, iNkulumbuso, kunye nelizwi lika-Alexa lokufikelela, akufuneki ushiye eli jelo libalulekileyo.
Bhalisa iPodcast yakho ngeAmazon Music
Ngokukhetha, ungabhalisa i-podcast yakho ngezi zixhobo kunye nemikhombandlela ukwandisa ukufikelela kwakho:
Acast - Nokuba i-podcast yakho ibanjwe komnye umboneleli, ungayibhalisa i-podcast yakho ngeakhawunti yokuqala yasimahla.
Yongeza iPodcast yakho kwi-Acast
Naliphi na iPod -I-AnyPod sisakhono esidumileyo sezixhobo zeAmazon ezinamandla.
Yongeza iPodcast yakho kwi-AnyPod
I-Blubrry - I-Blubrry ikwalolona lawulo lukhulu lwe-podcast kwi-Intanethi, ngaphezulu kwama-350,000 ee-podcast ezidwelisiweyo. Banikezela ngentengiso kunye nezinye iinkonzo zabapodcasters.
Yenza iAkhawunti yeBlubrry yasimahla kwaye ungeze iPodcast yakho
Umhluli - Umhluli yindawo yentengiso yokuthengisa kunye nokwazisa iipodcast zakho. Iapp yabo ilungile, kwaye yenza ukuba ukwabiwa kweepodcast yakho kube luncedo ngakumbi.
Qhagamshela iPodcast yakho kwiBreaker
Ibhokisi yebhokisi - Ibhokisi yebhokisi ibonelela ngestudiyo soMdali seCastbox, iseti yezixhobo ezinee-analytics ezinamandla ukuze ukwazi ukulinganisa kunye nokuzibandakanya nababhalisi bakho kunye nokusasaza kunye nokubonelela ngokukhuphela.
Imikhombandlela Ekuhambiseni iPodcast yakho kwiCastbox
IHeartRadio - kuba iHeartRadio, kulapho kuhlawulela khona ukuba neLibsyn njengombuki zindwendwe wakho. Banobudlelwane neHeartRadio kwaye unokuseta iakhawunti yakho yeLibsyn ukwenza ngokuzenzekelayo kwaye wondle ijelo lakho. Ukuseta oku, phantsi kwethebhu "yokufikela" kwiakhawunti yakho, cofa ku "Yongeza eNtsha" kwaye emva koko ulandele imiyalelo yokuseta iHeartRadio stream. Qaphela: Ipodcast yakho kufuneka isebenze ngaphezulu kweenyanga ezimbini ngaphakathi kweLibsyn ngaphambi kokuba ungenise kwiHeartRadio.
Ngenisa iPodcast yakho kwiHeartRadio
lisibekele Ukuba ipodcast yakho sele ikwi-iTunes, iya kubonakala ngaphakathi kosuku kwiOvercast. Ukuba ayisiyiyo, ungayongeza ngesandla:
Ngesandla Faka iPodcast yakho kwiOvercast
Pocket Casts -Isicelo esisekwe kwiwebhu kunye neselfowuni esenza ukuba abasebenzisi baphathe kwaye bamamele kwizixhobo zonke. Ngenisa ipodcast yakho Ukufakwa kwePokotho kungenisile phepha.
Ngenisa iPodcast yakho kwiiPocket Casts
Ipodchaser - isiseko sedatha sepodcast kunye nesixhobo sokufumanisa. Injongo yabo kukwenza kube lula kuwe ukubonelela ngengxelo malunga neepodcast ozithandayo kunye nokufumana ngokulula iipodcast. Fumana i-podcast yakho kwi-Podchaser kwaye ungayibanga usebenzisa i-imeyile ebhalisiweyo kwi-podcast feed yakho.
Ibango lakho lePodcast kwiPodchaser
IPodknife IPodknife sisikhombisi esikwikhompyuter seepodcast esenza umsebenzi omkhulu wokuququzelela iipodcast ngesihloko kunye nendawo. Abasebenzisi banokuphonononga kunye nokuzithandayo iipodcasts zabo abazithandayo. Nje ukuba ubhalise kwaye ungene, uya kufumana ikhonkco lokungenisa kwimenyu.
KwiRadioPublic -I-RadioPublic yindawo ekumgangatho ophilileyo, eyoyikekayo, kunye nezezimali epodcast yeqonga lokumamela abalindileyo. Sinceda abaphulaphuli bafumane, bazibandakanye nabo, kwaye bavuze ngemali abenzi beepodcast-wena. Qinisekisa umboniso wakho kwiRadioPublic ukuqala ukudibanisa nabaphulaphuli bakho namhlanje.
Ibango lakho lePodcast kwiRadioPublic
Umthungi - Ngokwam, iStitcher yeyona app yam ndiyithandayo. Konke ukuphulaphula kwam ipodcast kwenziwa ngale app. I-Stitcher sisimahla usetyenziso olunemiboniso engaphezulu kwama-65,000 kunye neepodcast ezikhoyo. Ukungenisa ipodcast yakho, kuyakufuneka ubhalise njengeqabane. Izibalo zakho zibonisa ukuba ziyafumaneka kwiQabane Portal nalo.
Yongeza iPodcast yakho kwiStitcher
TuneIn - I-TuneIn sesinye isikhombisi simahla onokuhambisa ipodcast yakho. Ukungenisa ipodcast yakho, kuya kufuneka ugcwalise ifom. Awuyi kuba ne-akhawunti kunye neTuneIn njengokuba uya kwenza kunye nezinye iirejista. Ke, ukuba ufuna ukuhlaziya nantoni na kwi-feed yakho, kuya kufuneka uyenze kwakhona le nkqubo. I-TuneIn ikwanaso nesakhono seAmazon apho ipodcast yakho ingadlala khona ngezixhobo ze-Alexa!
Yongeza iPodcast yakho kwiTuneIn
Vurbl Indawo yokusasaza yeaudiyo kuzo zonke iintlobo zabadali beaudiyo, kunye nabani na othanda ukumamela umsindo. Sibaxhasa abadali beaudiyo ngemodeli yesikhululo sethu kwaye sinceda abaphulaphuli ukuba banxibelelane nomxholo onentsingiselo ukuze babamamele.
Ibango lesikhululo sakho seVurbl
Yabelana ngeeAgograms kwiMidiya yoLuntu
I-Audiogram -Jika iaudiyo yakho ubandakanyeke kwiividiyo zentlalo kunye I-Audiogram.
Intloko -Yila ii-audiograms zefomathi, iziqendu ezipheleleyo kwividiyo, ukhuphele ngokuzenzekelayo, kwaye ukhuthaze i-podcast yakho ngeevidiyo ezininzi kangangoko ufuna Intloko.
Wavve - Wavve yenza ukuba wenze ii-audiograms-iividiyo ezinomsindo wakho we-podcast- enokwabelwana ngazo ekuhlaleni usebenzisa umdlali wabo.
Uyilungiselela njani iPodcast yakho
Ngaba uyazi ukuba iGoogle ngoku isalathisa ii-podcast kwaye ikwabonisa kwi-carousel kwiphepha lesiphumo seinjini yokukhangela? UGoogle ubonelela ngeenkcukacha ngamanyathelo okuya qinisekisa ukuba ipodcast yakho ikhonjisiwe kwinqaku labo lenkxaso. Ndibhalile indlela yokuqinisekisa ukuba uGoogle uyazi ukuba unayo ipodcast ukuba unayo I-WordPress kodwa ibamba ipodcast kwipodcast yangaphandle inkonzo yokubamba.
Yongeza iPodcast Smart Banner
Izixhobo ze-iOS zinakho ukongeza ibhanile ebhalwe phezulu kwiwebhusayithi yakho kubasebenzisi be-Apple iPhone ukujonga ipodcast yakho, ukuyivula kwiPodcasts App, kwaye uyirhumele. Ungafunda ukuba ungayenza njani le nto kweli nqaku I-iTunes Smart Banners yeePodcasts.
Kukho ezinye izikhombisi ezihlawulelweyo onokuzisebenzisa ukusingatha ipodcast yakho okanye usebenzise nje njengesinye isikhombisi. Ngelixa unokuba mathidala ukuhlawulela ezinye zezi, ngekhe wazi apho abaphulaphuli bakho bamamele khona. Ndingacebisa ukuba bazame bonke ubuncinci unyaka omnye kwaye ndibone ukuba loluphi uhlobo lwezibalo ozifumanayo kwezi zikhombisi ngaphambi kokurhoxisa. Uninzi lwezi luqala ngeakhawunti yasimahla, kodwa uya kuphuma ngokukhawuleza kwisithuba kwiakhawunti yakho yasimahla.
Umtya - Umtya ibonelela ngayo yonke into oyifunayo ukwenza kunye nokwabelana nge-podcast yakho naphina.
AudioBoom - AudioBoom yenza ukuba ii-podcasters zibambe, zisasaze kwaye zenze imali ngesandi sakho.
PodBean - PodBean Ifana kakhulu ne-Spreaker njenge-host podcast. Kumava ethu, bekukho imicimbi ngokungenisa ukutya kwe-RSS kwinto yokuba ngekhe kusoloko kufumana iziqendu zamva nje. Kodwa okwangoku, ngumamkeli othandwa kakhulu phakathi kwabapodcasters.
PodSearch -PodSearch inikezela ngezixhobo zokukhangela ekulula ukuzisebenzisa, kubandakanya iindidi, imiboniso ephezulu, imiboniso emitsha, kunye namagama aphambili, ukukunceda ufumane iipodcasts. Bhalisa apha.
SoundCloud - SoundCloud yenye yezona zikhombisi zintsha ezikuyo iEdge yeWebhu Radio kunye neakhawunti yethu yeLibsyn, sikwazile ukuvumelanisa ngokuzenzekelayo ezi zinto zimbini kunye kunye nokudalwa kweakhawunti kwakulula ngeLibsyn.
Umthethi - Ispreaker ngumbuki zindwendwe odumileyo, ngakumbi phakathi kwabasasazi abafuna ukusasaza bukhoma. Banomdlali obalaseleyo oza kukuvumela ukuba usasaze ngqo kunye nokugcina isiqendu ngasinye kwabo baphoswa kukusasazwa ngqo.
Ndiqinisekile ukuba zikhona ezinye, kodwa ezi zezikhombisi esizisebenzisayo I-Edge Media Studios yabathengi bethu bokuvelisa i-podcast. Ukuba unabanye endinokuba ndibaphosile, qiniseka ukuba undazise kwizimvo ezingezantsi!
Abadlali bewebhu yePodcast
IWidget esecaleni kweWordPress yePodcast -Ngakhathaliseki ukuba ipodcast yakho ibanjelwe phi, ukuyongeza kwindawo yakho yindlela elungileyo yokufumana abaphulaphuli abafanelekileyo. I-WordPress Podcast Sidebar ivumela zombini iwijethi okanye ikhowudi emfutshane ukuba ifake yonke ipodcast feed (kunye nomdlali) naphi na kwindawo yakho.
jetpack -I-WordPress 'iplagi yokuqala yokunyusa indawo yakho ngoku inebhloko ye-podcast onokongeza kumxholo wakho owenza umdlali wePodcast ngokuzenzekelayo.
Nazi ezinye iiplagi ezongeziweyo eziya kuthi zibonise iipodcast zakho kakuhle ngaphakathi kweWindowsPress.
Iplagi yeWordPress yoMdlali weMP3
Iplagi yeRoyal Audio Player yeWordPress
Abadlali bePlagi zeWordPress zaBadlali beAudio5
Iplagi yoMdlali weWordPress elula
Iplagi yeSonaar MP3 Player WordPress
Ungalibali indima ebalulekileyo enokudlalwa yimithombo yeendaba ekukhuthazeni ii-podcast zakho, ezintsha nezindala! I-Twitter, i-Facebook, i-LinkedIn, i-Instagram… nkqu noGoogle +… zonke zinokukunceda ukuba ukhulise abaphulaphuli bakho kwaye uqhube abaphulaphuli kunye nababhalisi bomxholo wakho.
Ngesixhobo solawulo kwimidiya yoluntu njenge I-Agorapulse, Unokwenza umgca kwizabelo kuzo zonke iiprofayili ngokulula, kunye nokuseta izabelo eziphindaphindayo zezo podcast onokuthi uziqwalasele ukuba zihlala ziluhlaza. Okanye, ukuba usebenzisa isixhobo esifana ne- Isongezelelo, unokushicilela ngokuzenzekelayo ipodcast yakho kwiiprofayili zakho zemidiya yoluntu ngokuzenzekelayo.
Njengoko ukhulisa abaphulaphuli bakho kula maqonga, abalandeli abatsha basenokungaziboni iipodcast zakho ezindala, ke yindlela elungileyo yokwandisa ukubonakala. Isitshixo kukudala iiposti zemidiya yoluntu ezibandakanyekayo, endaweni yosasazo lwesihloko sepodcast sakho. Zama ukubuza imibuzo okanye ukudwelisa ezona zinto ziphambili zithathiweyo. Kwaye ukuba udliwanondlebe okanye wakhankanya olunye uphawu okanye umphembeleli, qiniseka ukuba ubamakishe kwizabelo zakho zentlalo!
Ukubhengezwa: Ndisebenzisa amakhonkco am adibeneyo kule posi ezimbalwa zeemveliso.
tags: acastumculo we-amazonnayiphi na ipodaudioboomibhlorryIbhokisi yebhokisicastroImithombo yeendabaIzitudiyo zemithombo yeendabaisikhombisi se-epodgoogleiheartradioItunesjetpacklibsynIntengiso yePodcastUdliwanondlebe lweemartechimbazaImikhombandlela yeepodcastisikhombisi sePodcastipodcast feedukusingathwa kwepodcastIipodcast metricsUkunyuswa kwepodcastUkudityaniswa kwepodcastPodcastingpodchaseripodknifeintshumayeloSoundCloudHilltownispreakerisitayileNgenisa ipodcast yakhoulwalamanotuneinvurblyibhabhiapho ungabamba khonaphi yokwazisaapho ungadibana khonaWordPress
UTom Brodbeck liQela eliCwangcisiweyo leDijithali kunye neQela leQela ledijithali eHirons, iarhente ethengisa ngokupheleleyo e-Indianapolis. Amava akhe ajolise kwi-SEO, ukuthengisa kwidijithali, ukuthengisa iwebhusayithi, kunye nemveliso yeaudiyo / yevidiyo. Uye wabonakaliswa kwiMithombo yeendaba yeNtlalontle namhlanje kunye neJenali yeeNjini zoPhando.